DISTRIKAN’ANTSIRABE : Kamiao telo nitandahatra indray voasakanan’ny jiolahy
Malaza ny fisian’ny fanakanan-dalana amin’ny lalana mihazo ny Kaominina Ibity, ao anatin’ny Distrikan’ Antsirabe. 21 mars 2016
Maro ireo fiara izay mandeha amin’iny lalana iny no lasibatra. Ny zoma alina, tokony ho tamin’ny 9 ora tany ho any dia kamiao telo no indray voasakan’ireo olon-dratsy.
Tsy lavitra ny tanàna no nahavoa ireto farany. Folo lahy no efa niandry azy ireo fotsiny teo amin’ny toerana mangin-gina. Heverina ho efa mpanao ity asa fanakanan-dalana ity ireo olon-dratsy ireo satria teo amin’ny toerana izay tsy ahafahan’ilay fiara mandeha mafy izy ireo no namely azy. Avy hatrany dia nataony tamba-be ireto fiara vaventy ireto.
Nitandahatra ry zareo, nifanao aloha sy aoriana ka ilay nitari-dalana teo anoloana no voasakana voalohany ary tsy afaka nandroso intsony ireo roa tao aoriana. Voahodidina ary tsy nisy afa-nihetsika ireo olona tao anatiny. Nandrahona tamin’ny fitaovam-piadiana nampaisany ireo jiolahy. Vola 20 000 Ariary sy finday roa no lasa tao amin’ilay kamiao voalohany raha mitotaly 58 000 Ariary kosa ny tao amin’ilay roa manaraka niaraka tamin’ny finday miisa dimy. Ankoatra izay vaky noho ny tora-bato nataon’ireto olon-dratsy ihany koa ny fitaratra eo anoloana sy ny fitoeran’ny solika ny roa tamin’ireto fiara lasibatra. Tsy nisy kosa anefa ny naratra.
Vaky nitsoaka izy folo lahy rehefa nahazo izay notadiaviny. Teo vao nihazakazaka nampandre ny fokonolona manodidina sy ny mpitandro filaminana ireto voatafika. Tamin’ny fotoana nahatongavan’ izy ireo teny an-toerana anefa efa tsy nisy tratra teo intsony ireo jiolahy. Mitohy ny fikarohana.